Nagarik Shukrabar - मेरो सुरक्षा कस्ले गर्ने ?
सोमबार, ३० मङि्सर २०७६, ०१ : २७ | शुक्रवार
साढे १० बजेसम्मको क्याम्पसको पढाइ सकेर भर्खर घर आएँ। मैले कसैलाई लैंगिकरुपमा आरोप लगाउन खोजेको हैन। तर कोही किन यति विधि गिर्न सक्छ ? म कलेज आउँदा जाँदा पब्लिक बसको प्रयोग गर्छु। महिला सिटमा बसिरहेकी थिएँ। केही समयपछि एकजना गर्भवती महिला आउनुभयो। त्यो सिट छाडेर पछाडिको सिटमा गएँ।
आडमा एकजना त्यस्तै ३५/४० वर्ष देखिने पुरुष थियो। उसले मेरो शरीर नजिक हात ल्यायो। मलाई छोयो पनि मलाई लाग्यो झुक्यो होला भन्ठानेर केही भनिनँ। मेरो काखमा मेरो झोला थियो।
उसको हात मेरो तिघ्रामुनि बिस्तारै राख्यो। त्यतिबेला नै गाडी हल्लियो। सोँचे कच्ची बाटो भएर होला यता सरेको। तर हैन रहेछ। उसको हात मात्र हैन शरीर नै म नजिक ल्याउन थाल्यो। मेरो रिसको सीमा नाघिसकेको थियो। मैले घुरेर हेरेँ। अलि तर्सेको हो कि जस्तो लाग्यो। मैले ओ दाइ मात्र भनेकी थिए सरी बैनी भनेर मुसुक्क हाँस्यो।
मैले अरु प्रतिकार गरेर गालामा चड्काउन पर्ने थियो सकिनँ। अहिले पनि मलाई एकदमै नरमाइलो लागिरहेको छ। हामी केटीहरुलाई किन जहाँ जान पनि असुरक्षित हुन्छ ? पढेलेखेको मानिसले नै किन हातपात गर्छन् ? सार्वजनिक यातायातमा हाम्रो सुरक्षा कहिले ? म माथि भएको दुव्र्यवहारको को जिम्मेवारी हुने ?
स्राेतः नेप्लीज टिनेर्जस कन्फेक्सन